September 2018 – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတိုင်းနေ့စဉ် အသုံးပြုလေ့ရှိကြတဲ့ Underwear တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင်အသုံးပြုတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ်မှားမှန်းမသိမှားနေတဲ့ Underwearအယူအဆတွေက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on အတွင်းခံနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအယူအဆမလွဲစေဖို့(မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်) 👩👙👙
လူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသောအကြောင်းတွေကြောင့်နာကျင်မှုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိကြမယ်ဆိုတာမလွဲဧကန်ပါပဲ။ ဒီလိုနာကျင်စရာဒဏ်ရာတွေကိုအချိန်ကြာကြီးခံစားနေလို့လည်းမဖြစ် ရှေ့ဆက်ရမဲ့ကိုယ့်ဘ၀အတွက် နာကျင်ရတဲ့အရာတွေကိုဆေးကြောပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပင်မဲ့ရင်နဲ့ရင်နဲ့ရင်းပြီးနာကျင်ရလို့ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ ဒီလိုနာကျင်ငစရာဒဏ်ရာတွေကို ဆေးကြောလို့အကောင်းဆုံးအရာတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲ… (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု (၂) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on ဒဏ်ရာတွေကိုဆေးကြောလို့အကောင်းဆုံးအရာတွေကဘာတွေလဲ…🍁🍁
၀တယ်ဆိုတာလည်းတရားလွန်ဝရင်မကောင်းသလို ကြည့်မကောင်းအောင်ပိန်တာကြီး အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်သေးတာကြီးကလည်းကြည့်ရဆိုးလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူရှိသင့်ရှိထိုက်တာလေးတွေတော့ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ သူများတွေက ပိန်ချင်လို့ဝိတ်ချနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကဘာစားစားဝမလာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလား ၊ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဘယ်လောက်စားစားဝမလာလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့မမတို့အဖို့😉😉
လူကတော့နေကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ဘယ်တောပမှမလန်းဆန်းပဲ အတွေးတွေတဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။ လူကျန်းမာပင်မဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖျားနေတက်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက် ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းသာ နားလည်မြင်သာနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးရောဖျားနေသလား။ အောက်ကအချက်လေ 1. သင်ဟာလူတွေနဲ့စကားပြောရမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတက်တယ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ယူတို့စိတ်ကလေးဖျားနေပါပြီ…🤕🤕
တစ်ချို့သော Single တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရင်နာစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိခဲ့မှာပဲလို့သင်တွေးပေးခဲ့မိလား…ရည်စားမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကချစ်သူရည်းစားထားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လို့မထားတာ၊ တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်အကြိုက်မတွေ့သေးလို့၊တစ်ချို့က ပိတ်ပင်နှောင်ဖွဲ့မှုတွေများပြားလှတဲ့ချစ်ရေးချစ်ရာကြီးကို မွန်းကြပ်လို့၊ ဒီလိုပဲအမျိုးမျိုးသော Feelings » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on Single ပါ Single ပါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချစ်သူမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာနာကျင်စရာဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်…😥😥
Posted on September 30, 2018 September 27, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်လို့တွဲခဲ့ကြပေမဲ့ လူနှစ်ယောက်ကမွေးဖွားလာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ဟာ အမြဲအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုဖြစ်စေဖို့နီးစပ်တဲ့ အချက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… 1. မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးတွေမထားပါနဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ RS တိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ…❤❤
ကိုယ်နားမှာ မနေချင်တဲ့သူကိုယ်နဲ့နေရတာမပျော်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာသိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုစွန့်လွှတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားသင့်သလဲ… 1. နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့တွေးပါ ကိုယ်မရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ကိုယ်နဲ့ဝေးရာမှာမှနေချင်တဲ့သူမျိုးကို ကိုယ့်ဘ၀ထဲအတင်းဆွဲမသွင်းပါနဲ့။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲသူ့ကိုလိုအပ်လိုအပ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကိုယ့်နားမှာရှိမနေချင်တဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အခါ…😌
မိန်းကလေးတွေမှာကိုယ့်ချစ်သူယောက်ျားလေးကို ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ပဲဖြစ်ဖြစ် အမြင်ကတ်ပြီး မုန်းမိတဲ့အချက်လေးတွေရှိတက်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ဘယ်လိုအချက်တွေကို မိန်းကလေး အများစုက မုန်းတက်ကြတာလဲ… » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးကိုမိန်းကလေးတွေကြည့်မရဖြစ်တတ်ကြလဲ…🙃🙃
HIV ရောဂါဆိုးကြီးဟာလူတွေကြားထဲမှာအသံကြားလိုက်တာနဲ့သိပ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ ရောဂါကြီးတစ်ခုပါ။ဒီလိုရောဂါကို ခံစားဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာလူကြိုက်များကျော်ကြားခဲ့တဲ့Cele တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာ အံ့သြမထင်မှတ်စရာကိစ္စတွေပါ။ဘယ်Celeတွေက ရောဂါခံစားခဲ့ရလည်းဆိုတာ… 1. Magic Johnson » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, People & PlanetLeaveaComment on HIV/AIDSခံစားခဲ့ရတဲ့ Celeတစ်ချို့ အကြောင်းသင်တို့သိပါသလား…😒😒
အခုလက်ရှိကိုယ်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ လူကြီးဖြစ်နေရင်သော်လည်းကောင်း ၊ နောင်တစ်ချိန် ကိုယ်အလုပ်ရှင် လူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ် ဆိုရင်သော်လည်းကောင်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on အလုပ်ခွင်မှာဝန်ထမ်းကောင်းတွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်….✋